China Children Use hand Sanitizer TECH-BIO orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Zhongrong
Eo ambany fitarihan'ny covid-19, Hand Sanitizer dia lasa filàntsika manokana amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra amin'ny toerana sasany ampahibemaso toy ny sekoly, hopitaly, fivarotana lehibe, hotely, sns. Ity vokatra ity dia misy alikaola 75% izay mety hahafaty ny coronavirus sy mikraoba hafa hiambina antsika ara-pahasalamana. Ny fonosana 30ml dia natao manokana ho an'ny ankizy ary afaka lany eo amin'ny antsasaky ny volana, ka mahasalama ho an'ny ankizy. Azontsika atao ny manamboatra ny fonosana noho ny filan'ny mpanjifa. Rehefa mamokatra toaka ara-nofo isika, ny vidinay dia mifaninana amin'ny kalitao avo lenta. Ankoatr'izay, nandalo ny fanamarinana CE, FDA ary ISO izahay. Manomboka marika izahayTECH-BIO hanaovana azy ho marika No. 1 ho an'ny famonoana otrikaretina any Shina satria manana alikaola tsara indrindra any Shina izahay. Mpitarika any Shina izahay amin'ny teknolojia etanol. Manana faritra atrikasa 500000 metatra toradroa eo amin'ny faritanin'i Hebei, Sina izahay. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 1999. Na izany aza, azonay atao ihany koa ny mandray OEM & ODM ho an'ny karazana fanadiovan-tànana rehetra. Manantena ny ho lasa mpiara-miasa manerantany ary hahatanteraka ny toe-javatra mandresy!
Volume volume: 30ml
tombony: Miorina amin'ny alikaola · azo antoka eo amin'ny tontolo iainana · Tsy misy triclosan · Salama
Akora tsy miasa: Rano voadio, Carbopol, Alikaola Isopropyl, Triethanolamine
Ity karazana fanadiovan-tànana ity dia mety amin'ny ankizy satria tsy misy fofona ao anaty recette. Tsy misy singa manimba sy misy poizina ho an'ny ankizy. Ny fonosana tavoahangy plastika dia avo lenta ary tsy mora vaky. Ny habetsaky ny 30ml dia azo entina ary mora ampiasaina na aiza na aiza rehefa mamono otrikaretina ho an'ny ankizy ianao. Safidy safidinao io hiarovana ny fahasalaman'ny ankizy amin'ny otrikaretina mikraoba sy covid-19 mahazatra. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra OEM & ODM hanamboarana endrika hafa sy famolavolana fonosana miaraka amin'ny sary famantarana an'ny mpanjifa.